Vista's Colorful Planet: Family
ဒီတစ်ခါ စိမ်းစိမ်းစိုစို ငှက်လေးတွေကချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ
ပိကျိကွေးလေး ကွေးကွေးလေး အိပ်နေတာလားဗျ.
အိမ်တောင်ပြန်ချင်သွားပြီ။ အိမ်မှာဆို ကျနော်က မနက်မထဘူး။ ဖေရုံးသွား မေသစ်ပင်ရေလောင်းနေချိန် ကျနော်က အိပ်နေတုန်းလေ။
ဘတ်ဘတ်.. ဘတ်ဘတ် ..
(ကလေးပိကျိကွေးလေး လက်ညိုးထိုးပြီး အော်နေဟန် မြင်ယောင်ပါ)
လှလိုက်တာ၊ ဒီထက်ကြီးရင် ကောင်းမှာပဲ၊ စိတ်ကူးလေးလဲ ကြိုက်လိုက်တာ
ဒါ့ပုံလေးတွေ ကောင်းတာကွာ (ကင်မလာကောင်းလို့ )
လက်ရေးလေးတွေ လှတာကွာ (ကွန်ပျူတာနဲ့ ရေးလို့ )
စကားမစပ် ရွာသားလေးက ငှက်လားဟင် ?????????????? (အိမ်တောင် ပြန်ချင်ပြီဆိုလို့ ) (ငှက်ကလေးက ပိကျိကွေးလေး အိပ်နေတာမဟုတ်ဘူး ဆော့နေတာ)
ဗစ် ရွာသားကအကောင်းမေးတာဟုတ်ဘူးသိလား ၂ ကောင်တည်းနဲ့မလောက်လို့မေးတာ
တွင်းပိုး တွင်းပိုး ..